IBulawayo Chiefs iguqula izenzo | uMthunywa
08 Apr, 2021 - 00:04 2021-04-07T20:30:37+00:00 2021-04-08T00:02:49+00:00 0 Views
uThulani “Javas” Sibanda
KWAQALA ngokuvula isitolo sempahla yenguqu, khathesi iqembu leBulawayo Chiefs selisebenzisa imitshina yokwengeza lokuhlolisisa ukuqina kwabadlali.
Lesi yisiqalo kunguqu yeZimbabwe.
I-Bulawayo Chiefs ivumelane lenkampani ye-Catapult Sports ukuncedisa leliqembu ukusungula i-GPS Tracking System kunhlelo zayo zokulolonga abadlali.
Kumbiko othunyelwe iphephandaba likazulu, isikhulumi seBulawayo Chiefs uThulani Javas Sibanda uthe ukubambana le-Catapult Sports kuzancedisa abadlali benelise ukuthuthukisa ithalenta.
“Imitshina le ebizwa ngokuthi yi-technology iyinsika yokuguquka kwendlela ibhola eliphathwa ngayo umhlaba wonke,” kutsho uSibanda.
“IBulawayo Chiefs isitshintshe ukwenza ngokuba liqembu lakuqala ukusebenzisa imitshina yaphezulu.
Ukusebenzelana ndawonye lenkampani ye-Catapult Sports kuzadala umahluko omkhulu kubadlali bethu. Yikho okuzatshengisa ukuthi iBulawayo Chiefs liqembu elizimisele ukuthi liguqule ibhola lakithi, lifane lalelo esilibona emazweni.”
Uthe ukuvulwa kwenkundla zebhola linanobhutshuzwayo kuze ngesikhathi esifaneleyo, nanko sebedonsa ngonyawo olutsha.
“Siyajabula ukuthi i-technology le izasebenza silungiselela imidlalo yethu ezayo. Lokhu kuchaza kabanzi inhloso yeqembu.”